Utah #1 Porn အသုံးပြုမှုရှိပါသနည်း - Porn တွင်သင့်ဦးနှောက်
UPDATE: အောက်တွင်ဖော်ပြထားသောလုပ်အဆိုပါအချက်များကိုယခု peer-ပြန်လည်သုံးသပ်သုတေသနအတွက်အတည်ပြုခဲ့ကြသည်။ တွင် ညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံ-Related ကိုယ်ပိုင်အစီရင်ခံစာများအတွက်လူမှု Desire ဘက်လိုက်မှု: ဘာသာတရား၏အခန်းက္ပ (၂၀၁၇) ဒေါက်တာ Joshua Grubbs ကဘာသာရေးဆိုင်ရာပုဂ္ဂိုလ်များသည်၎င်းတို့၏ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကို (အမည်မသိစစ်တမ်းကောက်ယူခြင်းလေ့လာမှုများတွင်သို့မဟုတ်သုတေသီများအား) လိမ်ပြောခြင်းပိုများကြောင်းသူ၏ယူဆချက်ကိုစမ်းသပ်ခဲ့သည်။ “ ဘာသာရေးသမားများကလိမ်နေကြသည်” ဟူသောယူဆချက်သည်ပြည်နယ်တစ်ခုလုံးလေ့လာမှုများအပေါ်တွင်မူတည်သည် ပြည်နယ်များ ပိုပြီး porn ကိုသုံးပါလိမ့်မယ်။ ထိုကဲ့သို့သောတောင်းဆိုမှုများနှင့်အတူပြဿနာကိုအမည်မသိစစ်တမ်းများအလုပ်ကြောင့်နီးပါးတိုင်းလေ့လာမှုကိုတွေ့ဖူးကြောင်း အနိမ့် ဘာသာရေးလူပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးချင်းအတွက်ညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုနှုန်း။
ဘာသာရေးကိုင်းရှိုင်းသူများသည်၎င်းတို့၏ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများနှင့် ပတ်သက်၍ လိမ်လည်ခြင်းအတွက်သက်သေအထောက်အထားမတွေ့ရှိခဲ့ပါ။ အမှန်မှာ၊ ဘာသာရေးသမားများသည်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံအသုံးပြုခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ လောကသားများထက် ပို၍ ရိုးသားပေမည်။ ဤအချက်ကတစ်နိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာဖြင့်နှိုင်းယှဉ်မှုများသည်ဘာသာရပ်တစ်ခုစီ၏ဘာသာတရားအဆင့်ကိုဖော်ထုတ်သည့်အမည်မဖော်လိုသောစစ်တမ်းများထက်ယုံကြည်စိတ်ချရမှုနည်းနိုင်သည်ဟုဖော်ပြသည်။ ဘာသာတရားသည်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုကြည့်ရှုခြင်းမှကာကွယ်ပေးသည်။
“ သို့သော်လူကြိုက်များသည့်စိတ်သဘောထားနှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ကိုယ်ပိုင်ယူဆချက်များနှင့်ဆန့်ကျင်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ဘာသာရေးလူပုဂ္ဂိုလ်များသည်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေသုံးစွဲမှုကိုညစ်ညမ်းသောဘာသာတရားထက်စာလျှင်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေသုံးစွဲမှုအားအစီရင်ခံခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ ပိုမိုသိသာထင်ရှားသည့်လူမှုရေးဆိုင်ရာဘက်လိုက်မှုရှိသည်ဟူသောအကြံပြုချက်နှင့် ပတ်သက်၍ သက်သေအထောက်အထားများနှင့်သက်သေအထောက်အထားများစွာတွေ့ရှိခဲ့ခြင်းမရှိပါ။ ထိုဖြစ်နိုင်ချေကိုအကဲဖြတ်သည့်အပြန်အလှန်စည်းကမ်းချက်များသည်သိသာထင်ရှားသော (သို့) ပြောင်းပြန်လမ်းကြောင်းအတွက်သိသာထင်ရှားသည်။ ”
Utah သည်ညစ်ညမ်းသောနံပါတ် ၁ မဟုတ်ပါ။ မနီးစပ်ဘူး။ မကြာခဏထပ်ခါတလဲလဲထပ်ခါတလဲလဲမှတ်စုတိုသည် Benjamin Edelman ၏ ၂၀၀၉ ဘောဂဗေဒစာတမ်းမှပေါ်ထွက်လာခဲ့သည်။အနီရောင်အလင်းတိတ်: အွန်လိုင်းအရွယ်ရောက် Entertainment ကဝယ်ယူဘယ်သူနည်းသူကတစ် ဦး ထံမှ subscription ကိုဒေတာအပေါ်လုံးဝမှီခို တခုတည်းသော သူသည်ညစ်ညမ်းသောစားသုံးမှုနှင့် ပတ်သက်၍ ပြည်နယ်များအဆင့်သတ်မှတ်သည့်အခါလခပေးသည့်အကြောင်းအရာကိုပေးသည့်ထိပ်တန်းဆယ်ခုသည်အခြားဝက်ဘ်ဆိုက်များစွာကိုလျစ်လျူရှုခဲ့သည်။ သူကဘာကြောင့်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာဖို့ဒီတစ်ခုရွေးချယ်ခဲ့တာလဲ
Edelman ၏ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုအား ၂၀၀၇ ခုနှစ်ခန့်တွင်အခမဲ့လွှင့်ထုတ်လွှင့်သော“ ပြွန်ဘ်ဆိုက်များ” စတင်လည်ပတ်ခဲ့ပြီးနောက်ညစ်ညမ်းကြည့်ရှုသူများသည်၎င်းတို့ထံ ပိုမို၍ ပြောင်းလဲလာသည်ကိုငါတို့သိသည်။ ထို့ကြောင့်အက်ဒလမန်း၏အချက်အလက်တစ်ခုတည်းက (အခမဲ့နှင့်စာရင်းသွင်းထားသော ၀ က်ဘ်ဆိုက်များ) ထောင်နှင့်ချီသောအမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၏ညစ်ညမ်းသုံးစွဲသူများကိုကိုယ်စားပြုသည်ဟုမယူဆနိုင်ပါ။
ဒါမဟုတ်ဘူး။ တကယ်တော့အခြားလေ့လာမှုများနှင့်ရရှိနိုင်သည့်ဒေတာများသည်ပြည်နယ်များအကြား ၄၀ မှ ၅၀ အတွင်းအူတာ porn အသုံးပြုမှုကိုအဆင့်သတ်မှတ်သည်။ ကြည့်ပါ
ဤသုံးသပ်ချက်စာတမ်းသည်“ညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုသုတေသနတစ်ဦးကပြန်လည်သုံးသပ်: နည်းလမ်းနှင့်အလေးရင်းမြစ်များမှရလဒ်များကို။" Cyberpsychology: ဆိုက်ဘာစပေ့အပေါ်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာသုတေသနဂျာနယ် (2015)
သို့မဟုတ် ၂၀၁၄ ဆောင်းပါးဖတ်ရန်ပိုမိုလွယ်ကူခြင်း - Mormons နှင့် Porn ပြန်လည်စဉ်းစားခြင်း - ယူတာ ၄၀ တွင်အမေရိကန်ရှိ Porn အချက်အလက်အသစ်တွင်
2014 အတွက် Pornhub ထံမှယူလူတစ်ဦးချင်းစီစာမျက်နှာအမြင်များ, (အောက်တွင်ဖော်ပြထားသောဂရပ်).
မကြာခဏထပ်ခါတလဲလဲသော်လည်းမထောက်ခံသည့်“ နံပါတ် ၁ အဖြစ် Utah” ဒဏ္ ”ာရီ သည် 'ဘာသာရေးသမားများသည်ဘာသာရေးကိုင်းရှိုင်းသူများထက်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုပိုမိုအသုံးပြုသည်' ဟူသောအခြားလှည့်စားတတ်သောမှတ်ဥာဏ်ကိုအားပေးလေ့ရှိသည် တကယ်တော့, ဆန့်ကျင်ဘက်မှန်သည်။ ယာနျဘာသာတရားကို porn အသုံးပြုမှုဝေးအောက်ပိုင်းနှုန်းထားများခန့်မှန်းထားပါတယ်။
လေ့လာမှုများ၏သဘောအရဆိုလျှင် Non-ဘာသာရေးလူပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးချင်းနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါကဘာသာရေးတစ်ဦးချင်းစီအတွက်ညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုဝေးအောက်ပိုင်းနှုန်းထားများသတင်းပို့ပါ။ ဒီလေ့လာမှုတွေကိုစဉ်းစားပါ:
"ငါကမှား၏ယုံကြည်ပေမယ့်ငါနေတုန်းပဲလုပ်": နှိုင်းယှဉ်လုပျတဲ့သူဘာသာရေးလုလင်တစ်ဦးနှိုင်းယှဉ်ညစ်ညမ်းမသုံးပါ။ (2010)
တစ်ယောက်တည်းသို့မဟုတ်အတူတကွလိင်-အကဲဆတ်သောပစ္စည်းများကြည့်ရှုခြင်း: ဆက်ဆံရေးအရည်အသွေး (2011) နဲ့အသင်း
အမေရိကန်အထီးနှင့်အညစ်ညမ်း, 1973-2010: စားသုံးမှု, ခန့်မှန်း, ဆက်စပ်မှု (2013)
ယာနျဘာသာတရားကို, မိဘနှင့်ရွယ်တူချင်းနှောင်ကြိုးများနှင့်လွန်မြောက်အရွယ်ရောက်ပြီးသူများတွင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာမီဒီယာအသုံးပြုမှု (2013)
ယူနိုက်တက်စတိတ်အမျိုးသမီးများနှင့်ညစ်ညမ်းလေးဆယ်စုနှစ်မှတစ်ဆင့်: ထိတွေ့မှု, စိတ်နေသဘောထား, အပြုအမူ, တစ်ဦးချင်းခြားနားချက် (2013)
ယာနျဘာသာတရားကိုနှင့်အင်တာနက်ညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံအသုံးပြုမှု (2015) အကြားဆက်ဆံရေး
ဇနီးယောင်္ကျားစျယာနျဘာသာတရားကို, ဘာသာရေးစဘွန်းနှင့်ညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံစားသုံးမှု (2016)
ဘယ်လိုအများကြီးပို XXX ကမျိုးဆက်ကျောင်းသားများ X ကိုစားသုံးသူပါသလဲ 1973 ကတည်းကညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံမှ Related ပြောင်းခြင်းသဘောထားနှင့်အပြုအမူ၏သက်သေအထောက်အထား။ (2016)
ညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံစားသုံးမှုမှဘာသာရေးနှင့်လူထုအခက်အခဲ: လွန်မြောက်အရွယ်ရောက်ပြီးသူတစ်အမျိုးသားလေ့လာမှု (2017)
ယာနျဘာသာတရားကိုနှင့်အန္တရာယ်များ၏သြဇာလွှမ်းမိုးမှုဘွဲ့လွန်ကျောင်းသားများအကြားဘာထိတွေ့ဆက်ဆံရေးအပေါ်ရိုက်ယူခြင်း: မလေးရှားတက္ကသိုလ်များ (2017) တွင်တစ်ဦးကလေ့လာ
ညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုနှင့်အထီးကျန်ခြင်း: တစ်ဦးက Bi-directional တဲ့ request ကိုမော်ဒယ်နှင့်ရှေ့ပြေးစုံစမ်းစစ်ဆေးရေး (2017)
ညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံကိုသုံးပါကိုအဘယ်သူကောလိပ်ကျောင်းသားများ၏ Classes ရဲ့များ၏လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာသဘောထားများကို (2017)
အချိန်ကြာလာတာနဲ့အမျှညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုကိုခန့်မှန်း: Self-ဖော်ပြခဲ့သည် "စွဲ" အရေးပါသလား? (2018)
အထီးကျန်ခြင်းများအတွက်လျော်ကြေးနှင့်အစ္စရေးပြုစုပျိုးထောင်ခြင်းတွေထဲမှာလူမှုဆက်ဆံရေးကင်းမဲ့ခြင်း (2018) အဖြစ်အွန်လိုင်းညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံများ၏အသုံးပြုမှု
အမြိုးသမီးမြားရဲ့အညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှု, ညစ်ညမ်း၏သဘောထားအမြင်များနှင့်အကာအကွယ်မဲ့လိင်ဆက်ဆံမှုအတွက်တစ်ဦးချင်းကွဲပြားမှု: တောင်ကိုရီးယားကနေပဏာမရလဒ်တွေကို (2019)
Bandung ရှိ X တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားများအနေဖြင့် Cybersex အပြုအမူနှင့်ဘာသာတရား၏ဆက်နွယ်မှု (2019)
သင်ထိန်းချုပ်မှုခံစားနေရသလား လိင်ဆိုင်ရာအလိုဆန္ဒ၊ လိင်ဆိုင်ရာစိတ်ဓာတ်ပြင်းပြမှုနှင့်အပြာစာပေနှင့်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများအသုံးပြုမှုကိုအရိပ်အချုံပြုခြင်းနှင့်ပေါင်းသင်းခြင်း (၂၀၂၀)
လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအနိုင်ကျင့်ခြင်း၊ ဘာသာရေးနှင့်ဘာသာရေးဆိုင်ရာမဟုတ်သောအင်တာနက်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံလွှာအသုံးပြုသူများစိတ်လှုပ်ရှားမှုနှင့် ၀ ိညာဉ်ရေးအခက်အခဲကြားဆက်ဆံရေး (၂၀၂၁)
နောက်ဥပမာယူ, တစ်ဦး 2011 စက္ကူ ( "အဆိုပါဆိုက်ဘာညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံအသုံးပြုမှု Inventory: တစ်ဘာသာရေးနှင့်လောကနမူနာ Comparing") အနည်းဆုံးတစ်ကြိမ်တစ်ပါတ် porn ကိုအသုံးပြုတဲ့သူဘာသာရေးနှင့်လောကကောလိပ်ယောက်ျားများ၏ရာခိုင်နှုန်းကဖော်ပြခဲ့သည်:
ကောလိပ်ကျောင်း-အသက်ဘာသာရေးယောက်ျားအပေါ်တစ်ဦးက 2010 လေ့လာမှု "ငါကမှား၏ယုံကြည်ပေမယ့်ငါနေတုန်းပဲလုပ်": နှိုင်းယှဉ်လုပျတဲ့သူဘာသာရေးလုလင်တစ်ဦးနှိုင်းယှဉ်ညစ်ညမ်းမသုံးပါ ကြောင်းအစီရင်ခံ:
ဘာသာရေးလုလင် 65% အတိတ် 12 လအတွင်းအဘယ်သူမျှမညစ်ညမ်းကြည့်ရှုသတင်းပေးပို့
ဆနျ့ကငျြ, ကောလိပ်အရွယ်ယောက်ျား၏ Cross-Section လေ့လာမှုများ (porn ၏အတော်လေးမြင့်မားတဲ့နှုန်းထားကြည့်ရှုသတင်းပို့ယူအက်စ် - ၂၀၀၈: 87%, တရုတ် - 2012: 86%, နယ်သာလန် - 2013 ခုနှစ် (အသက် ၁၆ နှစ် - ၇၃ ရာခိုင်နှုန်း) ။
ကုသမှု-ရှာကြံ porn စွဲအပေါ်တစ်ဦးက 2016 လေ့လာမှုကြောင်းစျယာနျဘာသာတရားကိုတွေ့ရှိခဲ့ မပတျသကျဘူး လိင်စွဲမေးခွန်းလွှာအပေါ်အပျက်သဘောဆောင်သောလက္ခဏာများသို့မဟုတ်ရမှတ်များနှင့်အတူ။ "အဘယ်အရာကိုအရေးကြီး: ညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံသုံးစွဲမှုပမာဏသို့မဟုတ်အရည်အသွေး? ပြဿနာညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံအသုံးပြုမှုများအတွက်ကုသမှုရှာ၏စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့်အပြုအမူအချက်များ။ " (2016)
ကုသမှု-ရှာကြံ hypersexuals အပေါ်တစ်ဦးက 2016 လေ့လာမှု hypersexual အပြုအမူများ၏ဘာသာရေးကတိကဝတ်များနှင့် Self-အစီရင်ခံအဆင့်ဆင့်နှင့်ဆက်စပ်အကျိုးဆက်များအကြားအဘယ်သူမျှမကြားဆက်ဆံရေးတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ "ဘာသာရေးလူနာများအတွက် Hypersexual အပြုအမူများ၏ဆက်စပ်မှုစုံစမ်းစစ်ဆေး"(2016)
“ Utah Is # 1” စကားပြောအမှတ်သည်သိပ္ပံနည်းကျသက်သေပြပြီးသည်နှင့်ကြာမြင့်စွာပင်ခေတ်ရေစီးကြောင်းဆိုင်ရာစာနယ်ဇင်းပညာနှင့်လိင်ဆိုင်ရာဗေဒတွင်ဆက်လက်တည်ရှိသည်။ အဘယ်ကြောင့်?
နောက်ဆုံးအနေဖြင့် Joshua Grubbs လေ့လာမှုများ (“ ရိပ်မိစွဲလမ်းမှုလေ့လာမှုများ”) နှင့်ပတ်သက်သောမကြာသေးမီကဆောင်းပါးများကဤလေ့လာမှုများကအမှန်တကယ်အစီရင်ခံတင်ပြခဲ့သည့်အရာနှင့်ဤတွေ့ရှိချက်များအဘယ်သို့ဆိုလိုသည်ကိုအလွန်အထင်မြင်မှားစေသောပုံဖော်ရန်ကြိုးစားခဲ့သည်။ အများအားဖြင့်ဘလော့ဂါများနှင့်တစ်ခါတစ်ရံဂရပ်ဘ်စ်ကိုယ်တိုင်ကဘာသာတရားသည်ညစ်ညမ်းသောစွဲလမ်းမှုနှင့်အလွန်ဆက်စပ်မှုရှိသည်ဟုပြောဆိုခဲ့သည် အဲဒါမဟုတ်ဘူး။ ဤအတုအယောင်ဆောင်းပါးများကိုတုန့် ပြန်၍ YBOP ကပုံနှိပ်ထုတ်ဝေခဲ့သည် ဒီကျယ်ပြန့်ဝေဖန်မှု ယင်းကိုရိပ်မိစွဲလေ့လာမှုများနှင့်ဆက်စပ်လှညျ့ဖွားဆောင်းပါးတွေရာ၌တောင်းဆိုမှုများ၏။
Pornhub (2014) အပေါ်တစ်ဦးချင်းစာမျက်နှာ Views: Utah 40th ဖြစ်ပါသည်